XOG: Hoggaamiye La'aan, Daafac Xumo, Dhaawacyo & SHANTA Qoddob Ee Saldhiga U Ah Qaab Ciyaareedka Foosha Xun Ee Real Madrid Kusoo Bandhigayso Horyaalka La Liga. - Gool24.Net
XOG: Hoggaamiye La’aan, Daafac Xumo, Dhaawacyo & SHANTA Qoddob Ee Saldhiga U Ah Qaab Ciyaareedka Foosha Xun Ee Real Madrid Kusoo Bandhigayso Horyaalka La Liga.
Kooxda Real Madrid ayaa dhexda kaga jirta xaalad musiibo ah kaddib dhibaato kale oo kasoo gaadhay Eibar oo ay martiyeen, Real ayaa samaysay bilawgeedii ugu xumaa ee tobbaankii sano ee ugu dambeeyay.
Waxay ay durtaba qaabileen shan guuldaro kaddib 13 kulan oo laga ciyaaray horyaalka La Liga, Wargeyska fadhigiisu yahay caasimada Spain ee MARCA ayaa markan qiimayn ku sameeyay shanta qoddob ee sababta u ah in kooxda difaacanaysa Champions Leageu ay ku dhibtooto La Liga xilli ciyaareedkan.
Haddaba, Waxaan warbixintan idiinku soo gudbin doonaa shanta qoddob ee wargeyska MARCA uu u arko kuwa sababta u ah liidashada cad cadka ee xilli ciyaareedkan gaar ahaan kulamada La Liga.
1: Qorshe Ciyaareed Qaldan
Kani waa qoddobka ugu muhiimsan dhammaan, Real Madrid ayaa ilawday inay sagaal bilood gudahood ugu tartamayso saddex koob oo aad u baahantahay inaad samayso saf tartama, Kooxda ayaan kaliya iibin Cristiano Ronaldo oo ahaa qaladka ugu weyn ee ay sameeyeen balse sidoo kale waxa ay fasaxeen Kovavic iyo Achraf oo shaqo cajiib ah ka qabanaya Chelsea iyo Dortmund sida ay u kala horreeyaan.
Iibinta xiddigaha ayaan kaliya ahayn dhibaatada balse qaab qorshaynta kooxda ayaa u muuqata mid halawsan, Madrid ayaa boosaska ay xiddigaha kusoo buuxisay ay kamid yihiin da’yarka Odriozola oo buuxinaya booska Carvajal oo dhaawacan, Courtois oo ilaa haatan bandhigyo musiibo ah samaynaya iyo Mariano oo xiddig wanaagsan ah walow uusan mid heer sarre ah u ahayn sidii Ronaldo, Sidoo kale bixitaankii Pepe, James, Morata iyo Danilo ayaa kooxda musiibo ku noqday.
2: Bandhigyo liita oo inta badan ee ciyaartoyda ah
Inta badan safka kooxda ayaan dhinacnaba uga dhawayn qaab ciyaareedkii ugu fiicnaa, Tusaalaha ugu wanaagsan ayaa ah Luka Modric, Xiddiga ree Croatia ayaa si wanaagsan ku dhammaystay xilli ciyaareedkii hore si lamid ah tartankii Koobka Aduunka laakiin tan iyo soo laabashadiisii kooxda waxa uu awoodi waayay inuu xirfadiisii kusoo bandhigo kooxda.
3: Liidasho dhinaca daafaca ah
Daafaca kooxda ayaa ahaa mid liita inta ugu badan ee kulamada ay ilaa haatan soo ciyaareen, 19 kulan ayay Madrid kasoo dheeshay tartamada oo dhan waxaana ay shabaq nadiif ah la baxeen kaliya toddoba kulan.
Kooxaha ugu waaweyn ee ay Real shabaqa ka ilaashatay ayaa ahaa Atletico Madrid kulankii La Liga (0-0) iyo AS Roma (3-0) balse waxa sida daadka shabaqooda u gaadhay Barcelona (5-0), Atletico Madrid Kulankii Super Cup (4-2) iyo Sevilla iyo Eibar oo min (3-0) ku jiidhay.
4: Hoggaamiye La’aan
Cristiano Ronaldo ayaa kooxda macasalaameeyay balse taasi maaha mar-marsiiyo, Waxa la filayay inay masuuliyada uu CR7 sagaalkii sano ee ugu dambeeyay siday qaadaan midkoo Bale amaba Benzema, Kooxda ayaan haysan xidig heer sarre ah oo hore u riixa marka ay xaalad adag dhexda kaga jirto.
Hogaamiye la’aanta kooxda ayaa hore usoo if-baxday kaddib markii ay kooxdu 801 daqiiqo wax gool ah dhalin kari wayday waxaana ay tusaale cad u noqotay sida uu xiddigan shanta jeer hantay Ballon d’Or muhiimka ugu ahaa Los Blancos.
Dhaawacyada ayaa door weyn ku qaatay in Los Blancos ay dhibaato weyn la kulanto xilli ciyaareedkan, Da’yarka daafaca midig ee Odriozola ayaa xanuun dareemay kaddib goolkii labaad ee Eibar waxa sidoo kale xilli ciyaareedkan dhaawacyo u dhibtooday xiddigaha kala ah Carvajal, Bale, Nacho, Casemiro, Reguilon, Sergio Ramos, Vallejo iyo Benzema